U disk lama furi karo, waxaa jira xog soo kabasho muhiim ah - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>U disk lama furi karo, waxaa jira xog soo kabasho muhiim ah
U disk lama furi karo, waxaa jira xog soo kabasho muhiim ah
U disk lama furi karo, waxaa kujira xog muhiim ah, sidee loo soo celin karaa xogta? Xaqiiqdii, soo kabashada xogta U disk waa mid aad u fudud Halkan waxaa ku yaal sida looga soo kabto xogta diskiga U aan la arki karin. Soo kabashada xogta diskka ah ee loo yaqaan 'disk disk disk' waxay u baahan tahay in la dhammeeyo iyada oo gacan laga helayo barnaamijyada soo kabashada xogta. Bplandatarecovery waa barnamij xirfadeed oo soo kabasho ah oo taakuleeya soo kabashada xogta aaladaha kaladuwan ee ay ka mid yihiin U disk, disk disk, disk disk mobile, kaadhka xusuusta, disk mashiinka kombiyuutarka, RAID, waxna ka qaban kara waxyaabo kala duwan. Dhibaatooyinka luminta macluumaadka caadiga ah, sida tirtirka shilka, qaabka, burburka qeybinta, luminta qeyb, iwm. Markay Bplandatarecovery soo ceshanayso xogta, qalliinku ma dhib badna. Xitaa isticmaale cadaan ah oo aan khibrad u lahayn wax dhibaato ah kalama kulmin ku shaqeynta barnaamijka. Waxyaabaha soo socdaa waa habka faahfaahsan ee xogta dib u soo kabashada U disk:
Tallaabada 1: Orod Bplandatarecovery software, oo kuxir diskka U ee ubaahan inuu xogta kombiyuutarka ku soo ceshado, si uu softiweerka u aqoonsan karo diskka U. diskiga kumbuyuutarka ku jira waxaa lagu soo bandhigayaa dhanka bidix ee Bplandatarecovery interface.Hadii aysan jirin USB USB halkan ku xusan oo ubaahan dib u soo kabashada, howlgalka soosocda ee soosocda looma qaban karo. Tallaabada 2: Xulo U disk u baahan dib u soo celinta xogta oo guji badhanka faylka soo celinta, softiweerku wuxuu dhejin doonaa daaqadda faylka soo celinta, sida hoos ku cad. Daaqadda dib u soo kabashada, hubi ikhtiyaarka soo kabashada oo guji batoonka bilowga si aad ugu oggolaatid in kombuyuutarradu ay bilaabaan iskaanka diskka U. Maadaama U diskku u dhaawici karo heerar kaladuwan, waxaa lagugula talinayaa inaad iskaanka u dhigto sida ku xusan xulashada barnaamijka kumbuyuutarka. Fadlan gali diskka drive wadida
Tallaabada 3: Tirtir oo dib u fiir faylka. Habka iskaanka ee loo yaqaan 'Bplandatarecovery' waa la arki karaa, inta lagu guda jiro iskaanka, softiweerku wuxuu si joogto ah u liis garayn doonaa faylasha uu helay. Markaad aragto feylka, waad sii fiirin kartaa faylka .. Sida ku cad shaxanka hoose, guji feyl, daaqad yar oo muraayad ah ayaa ka soo muuqanaysa barnaamijka hoostiisa; haddii aad laba-guji feylka, daaqad weyn oo daaweyn ah ayaa soo furi doonta, markaa waxaad arki kartaa asalka faylka asalka ah. . Adiga oo fiirinaya feylka, si dhakhso leh ayaad u xaqiijin kartaa haddii faylka uu sax yahay iyo inuu waxyeelo leeyahay. Tallaabada 4: Ka soo kabashada faylasha kombiyuutarka 'disk disk'. Marka skaanka la dhammeeyo ka dib, waad koobi kartaa feylasha si aad u dhammaystirto nidaamka dib u soo kabashada xogta 'disk disk': calaamadi faylka aad rabto ama faylka, midig-riix jiirka oo dooro ikhtiyaarka "Nuqul si Faylka Xaddidan". Fadlan ku gal diskka wadista gaariga
Fadlan kor ku xusan waa sababta falanqaynta sababihii degdega ahaa ee loo gelinayay wadista markii U disk-ga aan la furi karin. Xalka iyo soo bandhigida hannaanka dib u soo kabashada xogta Haddii aad hayso su'aalo kale oo ku saabsan U disk ama aad rabto inaad waxbadan ka ogaato soo kabashada xogta, waxaad hubin kartaa faylka caawinta ee shabakadda ama la xiriir kooxda khubarada Bplandatarecovery. Software Bplandatarecovery wuxuu leeyahay labo algorithms-raadin oo xog ku dhisan, oo dib uga soo kaban kara faylasha lumay iyada oo loo marayo qaab dhismeedka asalka ah ee faylka, sidoo kale waxay ku sameyn kartaa soo kabsasho qoto dheer iyada oo loo marayo nooca feylka. Habka iskaanka ee softiweerku waa in la soo bandhigo xogta la helay intii skaanka la qaadayo.Haddii xogtii loo baahday la helay, si dhakhso leh u soo celi iyada oo aan sugin dhamaadka skaanka, oo waqti badbaadinaysa. Ka sokow soo kabashada xogta ka luma kaarka xusuusta, softiftarku wuxuu sidoo kale taageeraa aalado kale oo kaydinta xogta ah, sida kumbuyuutarrada kombiyuutarka, diskiga mobilada adag, U diskiga, diskiyada saxda ah (VHD, VMDK, VDI) , RAID, iwm. Intaa waxaa sii dheer, loogu talagalay xirfadlayaasha soo kabashada xogta, waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa qaybta waxqabadka tafatirka ee softiweerka si aad gacantaada uga soo kabato adigoo tafatirka xogta hexadecimal. Maqaalkani wuxuu soo bandhigayaa habka xogta kaarka xusuusta wuxuuna bixiyaa casharro faahfaahsan oo garaafyo ah xaaladaha xaaladaha kaadhka xusuusta ee guud. Markaad la kulanto dhibaatada luminta xogta kaadhka xusuusta, waa inaad si deggan ula tacaasho, oo aad raacdaa tababbarka habboon ee maqaalkan si tartiib tartiib ah loogu soo celiyo. Nooca tijaabada ah ee bilaashka ah ee barnaamijka soo kabashada xogta ee Bplandatarecovery ayaa kaa caawin kara inaad ogaato bal in xogta lumay dib loo soo ceshan karo, iyo geedi socodka soo kabashada oo dhammi ay tahay hawlgal aqrinta, iyo adeegsadayaasha cadaanka ah sidoo kale waxay u adeegsan karaan kalsooni.
PreU diskku wuxuu dardar galinayaa "Fadlan gal diskka wadiddiisa", sida loo soo celiyo xogta?
NextSidee dib loogu soo celiyaa feylasha tirtiray ee diskiga U? Casharrada ugu dambeeyay ee garaafyada